Wepamusoro 25 Tweaks eIOS 9 - Nyamavhuvhu Edition | IPhone nhau
Wepamusoro 25 Tweaks eIOS 9 - Nyamavhuvhu Edition
Kana isu tave kuda kupedza mwedzi waMbudzi, kubva kuActualidad iPhone isu tanga tichikuratidza ma tweaks matsva auya kuCydia pamusoro peiyo tweaks iyo yakazogadziridzwa uye yatove ne100% inoenderana neJailbreak yeIOS 9. Kana iwe uri mudiwa weJailbreak saka tinokukoka kuti uongorore rondedzero yacho kana imwe yakakuwira iyo zvimwe waifunga kuti yakasiiwa. nechikamu kubva kunogadzira. Kana kuti pamwe unowana tweak inoita zvakafanana neiyo tweak iyo isina kungovandudzwa kune ino yazvino vhezheni inoenderana neJailbreak.
2 Baumans (Kunobva)
24 Chitubu 3
Kana uchibatanidza mahedhifoni, iyi tweak ichatiratidza menyu ine runyorwa rwemimhanzi mafomu atakaisa parunhare.
Kunobva iyo BytaFont 3 tweak
Iyo inotibvumidza isu kushandura iyo font font kune chero imwe font yatinoda. Zvimwe zvinyorwa zvinogona kuwanikwa muCydia mune iyo Source chikamu.
Kutsvaga nekukurumidza kune maaramu atakagadzira mune yedu wachi kubva kunzvimbo yekudzora
Gadzira iyo dashboard zvidhori yakatenderera.
Chinja ruvara rwezviziviso kune watinoda zvakanyanya.
Chinja iro ruvara rwechigadzirwa chinyorwa chinoratidzwa sezvatiri kunyora.
Chinja ruvara rwe switch (girini nekusarudzika) mune ese iOS 8 uye iOS 9
Iyo inoratidza chiratidzo pamwe nekudhirowa kwemahedhifoni pabhawa yepamusoro kuti uzive kuti zvakabatana.
Shandisai mamiriro eusiku pane yedu iPhone patinozoishandisa usiku mune yakaderera mwenje.
Patinenge tichiteerera rwiyo uye tichimhanya mutambo, iyi tweak inotibvumidza kuti tirambe tichiridza mimhanzi pachinzvimbo cheizvo mutambo watipa.
Viga chikamu chekushandisa muZvirongwa
Chinja iyo icon yeMusic app kune iyo irikudamba dambarefu.
Chete kune iPhone 6s uye 6s Plus. Iyo inotipa isu haptic rukudzo pese patinodzvanya pamakiyi. Repo repo.cpdigitaldarkroom.com
Iyo inotibvumidza isu kuvhara ese maapplication ayo akavhurika neyakareruka chiratidzo.
Uchishandisa iyo 3D Kubata basa, inotitaridza iwo maficha ari mukati mefaira. Repo apt.golddavid.com
Bvisa bhatani reEmergency kubva pazasi password.
Boka Apple Wakatarisa-maitiro ziviso semakadhi
Bvisa iyo nhamba yezviziviso mumifananidzo.
Ita yako yekuvhara skrini ive pachena.
Iyo inotibvumidza isu kubvisa iyo Favorites tebhu kubva kuFoni application
Iyo inotibvumidza isu paPads isina kutsigirwa neiri basa natively, shandisa iyo inoyerera vhidhiyo vhidhiyo basa. Repo: rpetri.ch/repo/
Iyo inotiratidza isu iyo Reddit feed paSpotlight.
Ini ndinofunga pane zvishoma zvatinogona kutaura nezve iyi tweak iyo hatina kupindura kare.
Bvisa muganho wemakumi matatu akavhurika tabo muSafari
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » Wepamusoro 25 Tweaks eIOS 9 - Nyamavhuvhu Edition
Ini ndinokurudzira springtomize 3 kubva ku repo http://repo.icracktouch.com/ Mushure mekuyedza mune zvakasiyana repor ndiyo haina kundipa matambudziko uye iri muchiSpanish
Dzidza nezvekuti tinoshandisa zvakadii Apple Watch